Boky sy vakiteny: tsy ampy ny fanapariahana
Par Taratra sur 03/07/2020 NS Malagasy, NS-Culture
Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fanabeazana ny maha olona ny boky. Na soa tahaka izany aza ny hoentiny, tsy vitsy ny olana sedraina ao amin’ity tontolo iray ity, raha ny fanazavan’ny mpanoratra. Talohan’ny taona 1972, i Madagasikara no firenena mpamaky boky voalohany taty Afrika, raha jerena ny isan’ny boky lafo… Nanomboka nihena tsikelikely izany […]
Fahapotehan’ny kolontsaina: tsy tokony hazera amin’ny tanora ny rihitra
Maivana raha oharina amin-javatra hafa. Mbola lesoka eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina ary ny fomba amam-panao malagasy ny fampahafantarana azy ireny. Na any anivon’ny haino aman-jery, na any an-tsekoly na ao amin’ny ankohonana, zara raha resahina izy ireo. Tsy tazana loatra io tranga io fa saika mianjera any amin’ireo zaza sy ankizy ary […]
Nangina ilay feo tsy manam-paharoa: nodimandry, omaly, i Bakomanga
Tankina ny rehetra ! Nianaka nanerana ny tambajotran-tserasera maro, omaly, ny fodiamandrin-dRasoarinala Mariette, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Bakomanga. Raha ny fanazavana azo, fahatapahan’ny lalandra no nitarika izao fahafatesany izao. Teraka ny taona 1953 izy, izany hoe 67 taona i Bakomanga izao lasa izao. I Manga no fiantsoan’ny ray aman-dreniny azy. Teo amin’ny faha-13 […]
Tolo-tanana kristianina ho an’ireo traboina eny 67ha
Par Taratra sur 03/07/2020 Faits Divers, NS Malagasy
Rodobe ao anatin’ny hetsika tolo-tanana kristianina ho an’ireo traboina eny 67ha no karakarain’ny Fampiraisana kristianina ho an’ny firenena. Mifarimbona amin’izany ny FMMB, HFKF, FMBM, GDOP, MTEM amin’ny fanatanterahana ny hetsika ary miantso ny mpianakavin’ny finoana rehetra avy amin’ireo fiangonana sy fikambanana kristianina rehetra. Tafiditra indrindra ao anatin’ny 90 androm-pitahiana aorian’ny Androm-bavaka maneran-tany ny hetsika. […]
Vohipeno: mikatona ny trano fivavahana
Par Taratra sur 03/07/2020 Divers, NS Malagasy
Taorian’ny filazana fa misy olona iray mitondra ny tsimokaretina Covid-19 ao amin’ny distrikan’i Vohipeno, nandray fepetra avy hatrany ny governoran’ny faritra Vatovavy Fitovinany. Miverina ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina, manomboka amin’ny 9 ora ary mifarana amin’ny 4 ora maraina. Mikatona avokoa ny fiangonana sy ny mosqué ary tsy azo atao ny mamory olona mihoatra […]
Hampihenana ny loza ateraky ny moto: hanome fampianarana ny Red Dog Community
Hanova endrika ny tontolon’ny kodiaran-droa no tanjon’ny fikambanana Red Dog Community, sampana iray ao anatin’ny Red Dog Scoot Mada.Vina lehibe ny hanenana ny loza miseho ateraky ny moto tsy latsaky ny roa eto Antananarivo, isan’andro. Antony maro no mahatonga izany fa anisan’ny goavana indrindra ny tsy fifehezana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Mila hamboarina koa […]
Tazo mahery sa covid-19 ? feno marary ny tobim-pahasalamana
Tsy lehibe tsy kely fa tratran’ny aretina fanaviana be sy marary lamosina ary tsy mahare tsiron-kanina amin’izao fotoana. Mifanitsa-kitro ny olona eny amin’ny tobim-pahasalamana ary mitovitovy avokoa ny fisehon’ny aretina. Tsy fantatra intsony na tazo mahery na efa covid-19 no mahazo ny ankamaron’ny olona eto Antananarivo sy ny manodidina amin’izao fotoana. Marary an-doha, marary ny […]
Ny amiraly Ratsiraka : “Takina mangingina ireo Nosy malagasy”
“Amin’izao fotoana izao, zavatra iray no mampikatso azy: ny fitenenena be loatra eo amin’ny an-daniny sy ny an-kilany. Faharoa, ny And. 53 amin’ny lalàmpanorenana frantsay milaza hoe: tsy azon’ny filoha frantsay atao ny mamindra ny fiandrianam-pirenena, raha tsy mahazo fankatoavana avy amin’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona.” Izay ny fanazavan’ny filoha teo aloha, ny amiraly Ratsiraka […]
Misaona ny zandary: nodimandry ny Jly Rabotoarison Charles Sylvain
Par Taratra sur 03/07/2020 NS Malagasy, NS-Politique
Nodimandry, omaly teo amin’ny faha-76 taony teny an-tranony eny Vontovorona ny Jly misotro ronono Rabotoarison Charles Sylvain. Nanana olana momba ny tosidra izy ary izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Efa nitana andraikitra maro tamin’ireo fitondrana nifandimby ny tenany. Efa minisitry ny Atitany fony tamin’ny fitondran’ny Praiminisitra Razanamasy Guy Willy. Efa minisitry ny Tontolo iainana fony fitondrana […]
Mailo amin’ny valanaretina ny mpitondra fanjakana: natao tamin’ny « visioconference » ny filankevitry ny minisitra
Niova tsy tahaka ny nahazatra noho ny valanaretina. Tsy nifanatrika mivantana teny an-dapa ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta sy ny filoham-pirenena, tamin’ny filankevitry ny minisitra, afakomaly. Natao tamin’ny alalan’ny « visioconference » ny filankevitry izany. Niatrika izany tany amin’ny toeram-piasany avokoa ireo minisitra ary nampiasa fahitalavitra sy antso an-telefaonina, manaraka ny lamina tekinika ny fivoriana. Nohamafisina nandritra […]
Mahery vaika ny firongatry ny valanaretina: 100 ireo tranga vaovao, roa isan’andro ireo matin’ny coronavirus,
Tsy mbola nisy ohatra ity. Manomboka mampihorohoro ny tarehimarika fa nisesy tao anatin’ny andro vitsy ny fahafatesana olona roa hatrany noho ny coronavirus. Niampy roa indray izany, omaly ka tafakatra 24 izany izao ireo namoy ny ainy noho ity valanaretina ity. Enina be izao izany ny fitambaran’ireo lavo, hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity. Tsy vitan’izany […]
Fiahiahiana fiparitahan’ny valanaretina: notilina avokoa ireo polisy monisipaly eo anivon’ny CUA
Nambaran’ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina, omaly fa efa misy fandaminana eo amin’ny fomba fiasa sy ny fepetra noraisina eo anivon’ny CUA, taorian’ny fisian’ilay mpiasa iray maty voan’ny covid-19. « Noferana ireo mivezivezy ao amin’ny kaominina ary atao fitiliana avokoa ireo mpiasa. Efa nanomboka izany fitiliana izany ireo polisy monisipaly. Tahaka izany koa ireo mpiasa birao ary […]
Imbiki Herilaza : “Mila ialana ny fitsaram-bahoaka”
“Entanina hatrany ny olona: mila miverina tsikelikely amin’ny fahatokisana ny fitsarana. Mba hialana amin’ny fitsaram-bahoaka”, hoy ny sekretera jeneralin’ny minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza. Ny iangaviany ny mpitsara, ny mpirakidraharaha, mpandraharaha fonja: atao ny fanadihadiana ny antontan-taratasy, jerena araka ny hitsiny sy ny rariny, ao anatin’ny fanajana ny lalàna. Tsy tokony hohadinoina fa ny lalàmpanorenana […]
Fanoherana bontolo… mamono
Par Taratra sur 03/07/2020 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Tsy vitan’izay, malalaka ny fanehoan-kevitra ho an’ny tsirairay. Na izany aza, misy ny miteniteny foana amin’ny hevitra taingina sy hevi-dravina. Mahavalalanina sy mahafanina, amin’izao fotoan-tsarotra diavin’ny firenena izao ny sasany no manondrana. Tsy tokony hosamborina sy hosaziana, hono, izay tratra tsy manaja ny fepetra fisorohana ny fiparitahan’ny tsimokaretina […]
Par Taratra sur 03/07/2020 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Nanakoako ny poa-basy nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisy tao amin’ny fokontany Mangarano ka hatrany Barikadimy, Toamasina, ny alarobia alina teo. Fantatra fa miaramila serzà ny roa tamin’ireo jiolahy telo indray maty voatifitry ny polisin’ny Fip… Jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nifanehatra tamin’ny polisin’ny Fip notarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules, tamin’io fotoana […]
Andian-jiolahy any Ambatondrazaka : zaza vao enin-taona ny iray !
Tsy ampoizina, mahaketraka! Vaky ny trano fivarotana iray tao Madiotsifafana, Kaominina ambonivohitr’Ambatondrazaka, ny 3 mey lasa teo. Mbola nanao tampody fohy ireo olon-dratsy ny 10 mey. Nametraka vela-pandrika ilay niharam-pahavoazana…”Babo ny roa lahy, ny 28 mey. Afa-nandositra ny sisa.” Nandeha ny fanadihadiana. Voasambotra hatramin’ny mpividy halatra. Miisa 8 ireo mpangalatra ka ny iray vavy. ”Enin-taona […]
Fonjan’Antanimora: mihafeno ny efitrano fihibohana
Manomboka mihafeno ny efitrano fihibohana ao amin’ny fonjan’Antanimora. Ankehitriny, efa maherin’ny 200 ireo voafonja mihiboka ao an-toerana. Mitombo isan’andro kosa ireo miditra ny fonja, araka ny tatitra voaray. « Tsy afaka ny handray voafonja avy hatrany izahay na mizara isaky ny efitrano. Misy ny toerana manokana fihibohana ametrahana ireo vao miditra ny fonja sao mitondra ny […]
Analamahitsy: olona miisa 58 tsy nanao arovava, taxi-be iray naiditra “fourrière”
Mitohy hatrany ny hetsika ataon’ny polisim-pirenena amin’ny fampiharana ny fepetra amin’ireo minia mandika lalàna tsy mety manao arovava amin’izao ady amin’ny valanaretina coronavirus izao. Raha ny omaly, taxi-be iray tsy nanaja ny fepetra ara-pahasalamana no sady mandrisika ireo polisy hanao kolikoly teny Analamahitsy. Rehefa tratra tsy nanao arovava ny mpandeha iray tao akaikin’ny resevera ka […]
Cenhosoa Soavinandriana: miomana amin’ny fandraisana ireo mararin’ny Covid-19
“An-dalam-piomanana amin’ny fandraisana ireo mararin’ny tsimokaretina coronavirus ny hopitaly miaramila (Cenhosoa) Soavinandriana”, hoy ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Homi, ny Jly Rakoto Fanomezantsoa, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly teny amin’ny hopitaly. Nambaran’ity manamboninahitra ity fa ny fandraisan’andraikitry ny Foloalindahy amin’ny fiadiana ity valanaretina ity dia mitohy hatrany amin’ny alalan’ny BIS na Brigade d’intervention […]
Mahajanga – Covid-19: nahatratra 100 ireo voasazy tsy nanaraka fepetra
Tsy eto an-dRenivohitra ihany. Nahatratra 100 ireo olona tsy nanaraka fepetra ka voasazy tao Mahajanga, omaly. Hentitra ny fampiharana ny fepetra raisin’ny mpitandro filaminana. Mbola betsaka ireo tsy manaraka fepetra ho fiarovana ny Covid-19 ao Mahajanga. Omaly, nahatratra 101 ireo voasambotra tsy nanao arovava ka noraofin’ny kamiaon’ny zandary nanao ny sazy na ny « travaux d’intérêt […]
Par Taratra sur 02/07/2020 Economie, NS Malagasy
Nihaona tamin’ny Vondron’ny mpanondrana lohamenaka eto Madagasikara (Gehem), ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy (Medd), Rtoa Raharinirina Baomiavotse Vahinala, ny 30 jona teo. Noresahina ny olana sedrain’ny mpandraharaha mpanondrana sady nokarohina ny fanatsarana azo atao amin’ny fiaraha-miasany amin’ny fanjakana. Nohamafisin-dRtoa minisitra ny maha zava-dehibe ny fambolen-kazo sy ny hanavaozana izany. Nitatitra ny […]
Ambanja: tratran’ny mpanjono ny famotehana ala honko
Tratran’ny Federasiona fikambanan’ny mpanjono any Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava, sy Nosy Be (FUP BATAN)* ny fitrandrahana ala honko anaovana saribao any Anorontsangana, distrikan’Ambanja, faritra Diana, araka ny tatitra navoakan’ny WWF. Voarara hatramin’ny 2014, mbola araraotin’ny maro any amin’iny kaominina lavitra iny ny fitrandrahana ala honko. Hita mpanao izany ireo mpifindra monina avy any Atsimo sy avy […]
Hatramin’ny taona 1990, tsy mety tafarina fa mihamahantra hatrany ny ankamaroan’ny Malagasy tombanana ho 25 tapitrisa, araka ny tatitra nataon’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana (Pnud). Tamin’ny 2016, 410 dolara isan-taona ny fidirambolan’ny olona iray, salanisa amin’ny ankapobeny ; tafidina 360 dolara izany ny taona 2018, amin’ity 2020 ity, mety ho latsaka 280 dolara, noho […]
Manamafy ny fitiliana sy fanenjehana ny halatra jiro sy rano ny Jirama. Natsangana ny sampan-draharaha fitantanana manokana hisahana izany ary maro ny efa tratra fa tsy vitsy koa ny mbola manohy izany. Miteraka fatiantoka goavana ho an’ny Jirama ny fangalaran’ny mpanjifa sasany ny herinaratra na ny rano. Nananganana sampan-draharaha fitantanana manokana ny orinasa, hisahana ny […]
Judo – Mtre Domoina: nizara traikefa tamin’ny vidéo
Taorian’i Mtre Ratsimiziva Fetra, anjaran’i Mtre Rabenatoandro Domoina indray no nizara traikefa tamin’ny alalan’ny vidéo, ho an’ny taranja Judo. Tafiditra amin’ilay antso nataon’ny filohan’ny ligin’Analamanga, Raoelison Vola moa izany, ho an’ireo manana tepana mainty rehetra mba hizara traikefa sy fampianarana ireo judokas, mandritra izao hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny firenena izao. Fampianarana mahakasika ny Tandoku-Renshu […]
« Précédent 1 … 6 7 8 9 10 … 1 399 Suivant »